भद्रगोलकी रक्षा भन्छिन्, ‘जिग्रीसँग प्रेम सम्भव छैन’तर आर्यन सिग्देल चाहिँ मेरो फेभरेट हो,,। - Gaule Media ::
Home/मनोरञ्जन/भद्रगोलकी रक्षा भन्छिन्, ‘जिग्रीसँग प्रेम सम्भव छैन’तर आर्यन सिग्देल चाहिँ मेरो फेभरेट हो,,।
ramsharan२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०५:०६
नामले भन्दा पनि कामले जिग्रीको प्रेमिकाको रुपमा चिनिन्छिन् उनी । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको चर्चित हास्य शृङ्खला ‘भद्रगोल’मा जिग्री नामका एक पात्र छन् । उनकै प्रेमीका बनेकी छन् उनी । उनी अर्थात् रक्षा श्रेष्ठ । शृङ्खलामा पनि उनको नाम रक्षा नै राखिएको छ । ग्रामीण भेगकी एक युवतीको भूमिकामा उनी देखिँदै आएकी छिन् चाबहिलकी रैथाने रक्षाले थुप्रै विज्ञापनको अभिनयपछि हाँस्य शृङ्खलामा देखिएकी हुन् ।
थुप्रै विज्ञापन चलचित्र अभिनय गर्दा पनि खासै चिनिन नसकेकी उनी ‘भद्रगोल’मा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट भने रातारात सेलिबे्रटी बनिन् । शृङ्खलामा उनी जिग्री अर्थात् कुमार कट्टेलको प्रेमिकाको भूमिकामा देखिने गरेकी छन् । वास्तविक जीवनमा भने अहिलेसम्म प्रेमको अनुभव नभएको उनी बताउँछिन् । जिग्रीसँगको प्रेम पर्दाभित्रको मात्र बताउने उनी पर्दा बाहिर उनीसँग प्रेम असम्भव रहेको बताउँछिन् । केही म्युजिक भिडियो समेत अभिनय गरेकी रक्षासँगदश प्रश्न :
१ सौन्दर्यप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ ?
सचेत नै छु तर मेकअपका लागि भने धेरै समय लाग्दैन । बाहिर कतै जानुपर्दा आधा घन्टाभित्र मेकअप सक्ने गरेकी छु । सुटिङको समयमा मात्र हो, अलि बढी समय लाग्ने । अन्य समयमा म धेरै मेकअप गर्दिनँ, गर्न पनि मन पर्दैन ।
२ जिम जानु हुन्छ ?
बिहान हल्का दौडनेबाहेक अन्य केही गर्दिनँ । मेरो शरीरलाई फिटनेस आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
३ फेसनमा कतिको रुची छ ?
मेरो धेरै रुची भनेकै फेसनमा हो । तर, धेरै जिन्स पाइन्ट नै लगाउँछु । सुटिङमा कुर्तासुरुवाल र पार्टीमा साडी लगाउन मनपर्छ ।
४ मनपर्ने खानेकुरा नि ?
मलाई सबैभन्दा धेरै चाउचाउ खान मनपर्छ । मेरो मनपर्ने खानेकुरा भनेकै चाउचाउ हो ।
५ कतिको रिसाउनु हुन्छ ?
धेरै रिसाउने केटीमध्ये म पनि एक हुँ । आफूले भनेको कुरा भएन भने स–सानो कुरामा पनि रिस उठ्छ ।
६ वास्तविक जीवनमै जिग्री प्रेमी भएको भए ?
अहिलेसम्म प्रेम कसैसँग परेको छैन । प्रस्ताव त कक्षा आठमा पढ्दादेखि नै आउन थालेको हो । अभिनयका प्रेमी भनेका जिग्री हुन् । वास्तविक जीवनमा जिग्री अर्थात कुमार कट्टेलसँग प्रेम सम्भव छैन । हुँदै हँुदैन ।
७ पैसा बोक्न बिर्सिएर अप्ठ्यारो परेको अनुभव छ ?
बाहिर हिँड्दा प्रायः मेरो पर्समा तीन चार हजार टुट्दैन । एक पटक एरपोर्ट जाँदा पैसा बोक्न बिर्सिएछु । सो समय पार्किङमा दिने पैसा नहुँदा धेरै अप्ठ्यारो महसुस भयो । बल्लबल्ल अनुरोध गरेर मिलाए ।
८ कस्तो पुरुष मनपर्छ ?
हाइट भएको, आर्यन सिग्देलजस्तो लुकको केटा राम्रो लाग्छ । त्यस्तै हो मेरो रोजाइको पुरुष ।
९ घुम्न कतिको मनपर्छ ?
घुम्न मनपर्दैन । जाँदै जाँदिन । सुटिङबाहेकका समय घरमै बस्न मनपर्छ । किनभने कामको सिलसिलामा घुमि नै रहेको हुन्छु ।
१० काठमाडौँको मन नपर्ने पक्ष नि ?
सबैभन्दा मन नपर्ने पक्ष भनेको धुलो र धुवा हो । त्यसपछिको बोरिङ लाग्ने ट्राफिक जाम हो । यी कुरा राजधानीको तत्कालै सुधार्नुपर्छ ।